၅ မိနစ်အတွင်း ပိုကျန်းမာတဲ့သူဖြစ်အောင်ဖန်တီးကြမယ်
14 May 2018 . 11:18 AM
အခုတလော စိတ်ရှုပ် ခေါင်းရှုပ် နေရတာလည်းပေါ့ပါးသွက်လက်တယ်လို့မထင်ရ ကျန်းမာရေးလည်းမကောင်းဘူးလို့ ထင်နေရင် ၅ မိနစ်နဲ့ကျန်းမာအောင်လုပ်ကြည့်ကြမယ်လေ။ တကယ်တော့ လူကျန်းမာဖို့ ပေါ့ပါးရွှင်လန်းဖို့စိတ်ကအဓိကကျတဲ့အရာဖြစ်ပြီး သေးငယ်တဲ့ဂရုစိုက်မှုလေးတွေ(ဥပမာ- မနက်စာစားတာ) မျိုးကလည်း ကိုယ့်ကိုတစ်နေ့တာလုံး ကျန်းမာသွက်လက်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့ အထောက်အကူအများကြီးပေးပါတယ်။ ၅ မိနစ်အတွင်းကျန်းမာဖို့ လုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်တွေက လွယ်ကူရိုးရှင်းပါတယ်။
မှတ်စုစာအုပ်ဖွင့်ဆိုလို့ ပြောထားတဲ့အချက်တွေလိုက်မှတ်ရတော့မယ်လို့မတွေးနဲ့နော်။ အရင်ဆုံးစိတ်ကိုရှင်းရမှာမို့ စာအုပ်ပေါ်ချရေးခိုင်းတာပါ။ ဒီနေ့ငါဘာတွေလုပ်ရမှာလဲဆိုတဲ့ To Do List ကိုချရေးပါ။ လုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေချရေးပြီးရင် ဘာတွေလုပ်ချင်သေးလဲ ဆိုတာရေးပါ။ ပြီးတော့ စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်နေစေတဲ့ စိုးရိမ်နေစေတဲ့အရာကဘာလဲဆိုတာချရေးပါ။ ပြီးရင် အဖြေရှာပါ။ ဘယ်လိုဖြေရှင်းလို့ရနိုင်မလဲဆိုတာချရေးပါ။ ကဲ…ခုဆိုရင်တော့ တော်တော်လေး စိတ်ရှင်းသွားလောက်ပါပြီ။ ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာရယ် ဘယ်လိုလုပ်သင့်တယ်ဆိုတာရယ်ကို သိသွားပြီလေ။ စိတ်ညစ်လာချိန်တိုင်း ဒီလိုချရေးပြီးအဖြေရှာတဲ့အကျင့်ကိုလုပ်ကြည့်ပါ။ တစ်နေ့ကို ၂ ကြိမ်လောက်လုပ်သင့်ပါတယ်နော်။
Black Tea ၊ Green Tea အားလုံးက အင်တီအောက်ဆီဒင့်ပါပါတယ်။ ပါးစပ်ဆိုတာ အကျင့်လုပ်ရင် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အလုပ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် အိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် ကော်ဖီအစား ရေနွေးပြောင်းသောက်ကြည့်ပါ။ ရေနွေးဆိုရင်လည်း သောက်ချင်စရာ အနံ့အရသာလေးတွေ အများကြီပါနော်။ စံပယ်နံ့၊ လိမ္မော်ခွံနံ့၊ စပါးလင်နံ့ လေးတွေသောက်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ ကော်ဖီကို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အပြင်ထွက် သွားလာမှသောက်ပေါ့။ ကဖင်းဖြတ်ပြီး အင်တီအောက်ဆီဒင့်ကြွယ်ဝတဲ့ ရေနွေးလေးသောက်ကြည့်ရုံနဲ့ တစ်လအတွင်းမှာ အသားအရေတွေ ဘယ်လိုကြည်လာလဲဆိုတာ လက်တွေ့မြင်ရမှာပါ။ တစ်လပဲစမ်းကြည့်ပါနော်။ မလှလာရင် ကြိုက်သလိုပြော။
ဘတ်စကားစီးလာတာပဲဖြစ်ဖြစ် တက်စီစီးလာတာပဲဖြစ်ဖြစ် ရုံးရောက်တာနဲ့လက်ဆေးမယ်။ ကိုယ့်အလုပ်စားပွဲကို ၁ မိနစ်လောက်အချိန်ပေးပြီး သန့်ရှင်းရေးလေးလုပ်လိုက်မယ်။ ဒါလေးတွေလုပ်ရတာ ဘယ်လောက်မှမကြာပါဘူးနော်။ ဒါပေမဲ့ မမြင်နိုင်တဲ့ဗက်တီးရီးယားတွေကိုဖယ်ရှားပြီးသားဖြစ်တာကြောင့် ပိုကျန်းမာလာပါလိမ့်မယ်။ ဒီအလေ့အကျင့်သေးသေးလေးကနေစပြီး ပိုမိုသန့်ရှင်းသပ်ရပ်တဲ့သူဖြစ်လာမယ်၊ ပိုကျန်းမာတဲ့သူဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
ဖုန်းဖွင့် ဖေ့စ်ဘွတ်ဖွင့်လိုက်ချိန်ကို သတိပြုပါ။ ကိုယ်ကအမှတ်မထင် ဖေ့စ်ဘွတ်ဖွင့်သုံးလိုက်ပေမယ့် ကိုယ့်ရဲ့ကြည်လင်နေတဲ့စိတ်ကိုရောတန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်တွေကိုရော သူကဆွဲယူသွားပါလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ ဂိမ်းပါ။ ဂိမ်းဆော့တာကိုစည်းကမ်းလေးနဲ့ ထိန်းကြည့်ပါ။ ကိုယ့်ရဲ့စိတ်၊ ခန္ဓာကိုယ်အကြောင်းနဲ့ တကယ်လုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေအကြောင်းတွေးဖို့ သူတို့ကအနှောင့်အယှက်ဖြစ်နေတာအသေအချာပါ။ ၅ မိနစ်အတွင်း ကြည်လင်တဲ့စိတ်နဲ့ အားကောင်းတဲ့အတွေးစိတ်ကူးကိုရယူဖို့ အခုပဲဖုန်းကိုပိတ်ပြီး အတွင်းကအသံကိုတချက်ငြိမ်ငြိမ်လေး နားထောင်ကြည့်လိုက်ပါနော်။
အလုပ်က ထိုင်ခုံမှာထိုင်ပြီး ဘူပိတ်နေမယ့်အစား ၅ မိနစ်လောက် လမ်းလျှောက်ပါ။ လေကောင်းလေသန့်ရှူပါ။ ရုံးမှာ ထားထားတဲ့အပင်လေးတွေကြည့်ပါ။ ရေလောင်းခွင့်ရှိတယ်ဆိုရင် စပရေးဘူးလေးနဲ့ရေဖျန်းလိုက်ပါဦး။ အဲလိုမလုပ်ချင်ရင် ထိုင်ခုံမှာထိုင် နဖူးလေးတွေ နားထင်လေးတွေကို ခပ်ဖွဖွနှိပ်နယ်ပါ။ မျက်လုံးလေးခဏမှိတ်ပြီး ထွက်လေဝင်လေမှတ်ပါ။ ကဲ..နည်းနည်းတော့ Relax ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်။
ကျန်းမာပျော်ရွှင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ စိတ်ကအခရာကျနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်မကျန်းမာမပျော်ရွှင်ဘူးထင်တိုင်း အတွေးတွေကို အရင်ရှင်းကြည့်ပါ။ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် တကယ်တန်ဖိုးကြီးသောအစားအသောက်တွေကိုဖြည့်သွင်းလိုက်ပါ။ သေချာတာက ၅ မိနစ်အချိန်ပေးပြီးပိုမိုပျော်ရွှင်ကျန်းမာတဲ့သူအဖြစ်ကြိုးစားရင်းနဲ့ ကိုယ့် Lifestyle တစ်ခုလုံးကိုပါ ပြောင်းလဲလာနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ၅ မိနစ်လေးတွေကိုအရင်စတင်ကြည့်ကြပါစို့နော်။
၅ မိနဈအတှငျး ပိုကနျြးမာတဲ့သူဖွဈအောငျဖနျတီးကွမယျ
အခုတလော စိတျရှုပျ ခေါငျးရှုပျ နရေတာလညျးပေါ့ပါးသှကျလကျတယျလို့မထငျရ ကနျြးမာရေးလညျးမကောငျးဘူးလို့ ထငျနရေငျ ၅ မိနဈနဲ့ကနျြးမာအောငျလုပျကွညျ့ကွမယျလေ။ တကယျတော့ လူကနျြးမာဖို့ ပေါ့ပါးရှငျလနျးဖို့စိတျကအဓိကကတြဲ့အရာဖွဈပွီး သေးငယျတဲ့ဂရုစိုကျမှုလေးတှေ(ဥပမာ- မနကျစာစားတာ) မြိုးကလညျး ကိုယျ့ကိုတဈနတေ့ာလုံး ကနျြးမာသှကျလကျစှာအလုပျလုပျနိုငျဖို့ အထောကျအကူအမြားကွီးပေးပါတယျ။ ၅ မိနဈအတှငျးကနျြးမာဖို့ လုပျဆောငျရမယျ့အခကျြတှကေ လှယျကူရိုးရှငျးပါတယျ။
မှတျစုစာအုပျဖှငျ့ဆိုလို့ ပွောထားတဲ့အခကျြတှလေိုကျမှတျရတော့မယျလို့မတှေးနဲ့နျော။ အရငျဆုံးစိတျကိုရှငျးရမှာမို့ စာအုပျပျေါခရြေးခိုငျးတာပါ။ ဒီနငေ့ါဘာတှလေုပျရမှာလဲဆိုတဲ့ To Do List ကိုခရြေးပါ။ လုပျရမယျ့အလုပျတှခေရြေးပွီးရငျ ဘာတှလေုပျခငျြသေးလဲ ဆိုတာရေးပါ။ ပွီးတော့ စိတျဖိစီးမှုဖွဈနစေတေဲ့ စိုးရိမျနစေတေဲ့အရာကဘာလဲဆိုတာခရြေးပါ။ ပွီးရငျ အဖွရှောပါ။ ဘယျလိုဖွရှေငျးလို့ရနိုငျမလဲဆိုတာခရြေးပါ။ ကဲ…ခုဆိုရငျတော့ တျောတျောလေး စိတျရှငျးသှားလောကျပါပွီ။ ဘာလုပျရမယျဆိုတာရယျ ဘယျလိုလုပျသငျ့တယျဆိုတာရယျကို သိသှားပွီလေ။ စိတျညဈလာခြိနျတိုငျး ဒီလိုခရြေးပွီးအဖွရှောတဲ့အကငျြ့ကိုလုပျကွညျ့ပါ။ တဈနကေို့ ၂ ကွိမျလောကျလုပျသငျ့ပါတယျနျော။
Black Tea ၊ Green Tea အားလုံးက အငျတီအောကျဆီဒငျ့ပါပါတယျ။ ပါးစပျဆိုတာ အကငျြ့လုပျရငျ ဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ အလုပျမှာပဲဖွဈဖွဈ အိမျမှာပဲဖွဈဖွဈ ကျောဖီအစား ရနှေေးပွောငျးသောကျကွညျ့ပါ။ ရနှေေးဆိုရငျလညျး သောကျခငျြစရာ အနံ့အရသာလေးတှေ အမြားကွီပါနျော။ စံပယျနံ့၊ လိမ်မျောခှံနံ့၊ စပါးလငျနံ့ လေးတှသေောကျကွညျ့လို့ရပါတယျ။ ကျောဖီကို သူငယျခငျြးတှနေဲ့ အပွငျထှကျ သှားလာမှသောကျပေါ့။ ကဖငျးဖွတျပွီး အငျတီအောကျဆီဒငျ့ကွှယျဝတဲ့ ရနှေေးလေးသောကျကွညျ့ရုံနဲ့ တဈလအတှငျးမှာ အသားအရတှေေ ဘယျလိုကွညျလာလဲဆိုတာ လကျတှမွေ့ငျရမှာပါ။ တဈလပဲစမျးကွညျ့ပါနျော။ မလှလာရငျ ကွိုကျသလိုပွော။
ဘတျစကားစီးလာတာပဲဖွဈဖွဈ တကျစီစီးလာတာပဲဖွဈဖွဈ ရုံးရောကျတာနဲ့လကျဆေးမယျ။ ကိုယျ့အလုပျစားပှဲကို ၁ မိနဈလောကျအခြိနျပေးပွီး သနျ့ရှငျးရေးလေးလုပျလိုကျမယျ။ ဒါလေးတှလေုပျရတာ ဘယျလောကျမှမကွာပါဘူးနျော။ ဒါပမေဲ့ မမွငျနိုငျတဲ့ဗကျတီးရီးယားတှကေိုဖယျရှားပွီးသားဖွဈတာကွောငျ့ ပိုကနျြးမာလာပါလိမျ့မယျ။ ဒီအလအေ့ကငျြ့သေးသေးလေးကနစေပွီး ပိုမိုသနျ့ရှငျးသပျရပျတဲ့သူဖွဈလာမယျ၊ ပိုကနျြးမာတဲ့သူဖွဈလာပါလိမျ့မယျ။
ဖုနျးဖှငျ့ ဖစျေ့ဘှတျဖှငျ့လိုကျခြိနျကို သတိပွုပါ။ ကိုယျကအမှတျမထငျ ဖစျေ့ဘှတျဖှငျ့သုံးလိုကျပမေယျ့ ကိုယျ့ရဲ့ကွညျလငျနတေဲ့စိတျကိုရောတနျဖိုးရှိတဲ့အခြိနျတှကေိုရော သူကဆှဲယူသှားပါလိမျ့မယျ။ ပွီးတော့ ဂိမျးပါ။ ဂိမျးဆော့တာကိုစညျးကမျးလေးနဲ့ ထိနျးကွညျ့ပါ။ ကိုယျ့ရဲ့စိတျ၊ ခန်ဓာကိုယျအကွောငျးနဲ့ တကယျလုပျရမယျ့အလုပျတှအေကွောငျးတှေးဖို့ သူတို့ကအနှောငျ့အယှကျဖွဈနတောအသအေခြာပါ။ ၅ မိနဈအတှငျး ကွညျလငျတဲ့စိတျနဲ့ အားကောငျးတဲ့အတှေးစိတျကူးကိုရယူဖို့ အခုပဲဖုနျးကိုပိတျပွီး အတှငျးကအသံကိုတခကျြငွိမျငွိမျလေး နားထောငျကွညျ့လိုကျပါနျော။
အလုပျက ထိုငျခုံမှာထိုငျပွီး ဘူပိတျနမေယျ့အစား ၅ မိနဈလောကျ လမျးလြှောကျပါ။ လကေောငျးလသေနျ့ရှူပါ။ ရုံးမှာ ထားထားတဲ့အပငျလေးတှကွေညျ့ပါ။ ရလေောငျးခှငျ့ရှိတယျဆိုရငျ စပရေးဘူးလေးနဲ့ရဖေနျြးလိုကျပါဦး။ အဲလိုမလုပျခငျြရငျ ထိုငျခုံမှာထိုငျ နဖူးလေးတှေ နားထငျလေးတှကေို ခပျဖှဖှနှိပျနယျပါ။ မကျြလုံးလေးခဏမှိတျပွီး ထှကျလဝေငျလမှေတျပါ။ ကဲ..နညျးနညျးတော့ Relax ဖွဈသှားတယျဟုတျ။
ကနျြးမာပြျောရှငျတယျဆိုတဲ့နရောမှာ စိတျကအခရာကနြပေါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျမကနျြးမာမပြျောရှငျဘူးထငျတိုငျး အတှေးတှကေို အရငျရှငျးကွညျ့ပါ။ ခန်ဓာကိုယျအတှကျ တကယျတနျဖိုးကွီးသောအစားအသောကျတှကေိုဖွညျ့သှငျးလိုကျပါ။ သခြောတာက ၅ မိနဈအခြိနျပေးပွီးပိုမိုပြျောရှငျကနျြးမာတဲ့သူအဖွဈကွိုးစားရငျးနဲ့ ကိုယျ့ Lifestyle တဈခုလုံးကိုပါ ပွောငျးလဲလာနိုငျပါလိမျ့မယျ။ ၅ မိနဈလေးတှကေိုအရငျစတငျကွညျ့ကွပါစို့နျော။
by Moethae Say .2hours ago